Tag: atụmatụ weebụsaịtị | Martech Zone
Tag: atụmatụ weebụsaịtị
Iwulite webusaiti nwere ike buru oru siri ike, mana oburu n’iche banyere ya dika ohere ighazigharia ahia gi ma mee ka onyogho gi puta, i gha amuta otutu ihe banyere ika gi, ma nwekwa obi uto ime ya. Ka ịmalite, ndepụta nke ajụjụ a kwesịrị inyere gị aka ịdọrọ gị n'ụzọ ziri ezi. Kedu ihe ị chọrọ ka weebụsaịtị gị mezuo? Nke a bụ ajụjụ kachasị mkpa ị ga-aza tupu ịmalite
Onye isi m goro ọrụ nwa oge iji mepụta nnweta ahịa anyị chọrọ mgbe anyị wepụtara weebụsaịtị azụmaahịa ọhụrụ anyị. Onye ahụ goro ọrụ nwere ezigbo azụmaahịa mana ọ bụghị azụmaahịa azụmaahịa weebụ - enwere m obi ike na ha ga-enwe ike iburu ya ngwa ngwa (Atụrụ m anya!). Inye ụfọdụ ntụzịaka, enyela m onye ode akwụkwọ nnukwu akụ na ụba na ide ederede. Otu n'ime akụrụngwa bụ Junta42's Top Content